Xuquuqda iyo waajibaadka ardayda dhigata Dugsiga Sare, maxay yihiin? | Sameynta iyo daraasadaha
Xuquuqda iyo waajibaadka ardayda
Maria Jose Roldan | | Daraasado, Tababar, Hababka baridda, Ka Bixitaanka Shaqada
ka ardayda dugsiga sare leeyihiin taxane ah xuquuqda iyo waajibaadka ay tahay in la buuxiyo Marka si ay xarun fiican uga dhex shaqeyso laakiin intaas waxaa sii dheer, bulshada iyo iyaguba waa inaysan iloobin in ardayda oo dhami ay sidoo kale leeyihiin xuquuqo taxane ah oo ay tahay in la ixtiraamo oo aasaas u ah horumarkooda iyo guusha waxbarashadooda.
Sidaa darteed, carruurta iyo dhalinyarada waxay leeyihiin xuquuqo taxane ah oo lagu aqoonsaday Bayaanka Xuquuqda Carruurta iyo Heshiiska Xuquuqda Carruurta. Xuquuqda iyo waajibaadka ardayda waa in lagu ixtiraamo qof walba wayna sii ballaaranayeen ilaa Baaqii ugu horreeyay ee Jeneva ee 1924.
Xuquuqdan ardayda waxaa ka mid ah tan helaan tababar tacliimeed oo buuxiya heerarka tayada. Wiilasha iyo gabdhuhu waa inay fursad u helaan inay helaan tababar wanaagsan si markaa ay u helaan aasaaska lagama maarmaanka u ah inay ku guuleystaan ​​nolosha qaan-gaarka.
Annaga oo tixgelinayna (LOE / 2/2006, ee May 3, iyo farshaxanka. 3.4 Degree 15/2007, ee Abriil 19) waxaan ognahay in dhammaan ardayda ay leeyihiin xuquuq iyo waajibaad isku mid ah, iyada oo aan lakala soocin waxyaabo kale oo ka duwan kuwa laga soo qaatay da'da iyo heerka ay wax ku baranayaan dugsiga.
Aad ayey muhiim u tahay in ardaydu ay yaqaanaan dastuurka Isbaanishka iyo waliba qaanuunka madaxbanaanida ee u dhigma iyaga marka loo fiiriyo meesha ay degan yihiin si qaabkan ay u ogaadaan waxa ay yihiin qiyamka iyo mabaadi'da ay tahay inay raacaan bulshadeena. .
1 Xuquuqda ardayda dhigata dugsiga sare
1.1 Imisa imtixaan ayaa la samayn karaa hal maalin sharci ahaan?
2 Xaq u leeyahay in si siman loola dhaqmo, iyo sidoo kale xaq u lahaanshaha in lagu daro xarunta tacliinta
3 Xaq u lahaanshaha kaqeybgalka howlaha dugsiga (gudaha iyo banaanka xarunta) iyo adeegsiga xarumaha xarunta
4 Xaq u leeyahay inuu ku raaxeysto difaac ku filan dhammaan noocyada gardarrada (jireed ama nafsi) ama ku tumashada xuquuqdooda
5 Xaq u leeyahay inay soo bandhigaan soona bandhigaan ra'yigooda, inay la kulmaan oo ay wadaagaan
6 Xaq u leeyahay inuu helo tababar ku saleysan wacyiga deegaanka iyo daryeelka kheyraadka dabiiciga ah
7 Xaqa in la ixtiraamo waxa ay aaminsan yihiin iyo fikradahooda iyo in la tixgeliyo mabaadi'dooda anshaxa iyo waxa ay aaminsan yihiin
8 Xaq u leeyahay inaad hesho tababar tixgelinaya awooddaada, xawaarahaaga waxbarasho iyo dadaalkaaga
Xuquuqda ardayda dhigata dugsiga sare
Qaar ka mid ah xuquuqda aasaasiga ah iyo waajibaadka ardayda waa in la buuxiyo waa:
Xuquuqda helitaanka tababar dhammaystiran oo ku habboon horumarinta shakhsiyadda isla markaana gacan ka geysaneysa horumarintooda shaqsiyadeed iyo tan waxbarasho
Xaqa in lagu ixtiraamo dhammaan dhinacyada - aqoonsiga, sharafta, sharafta-
Xaq u leeyahay in la qiimeeyo oo la aqoonsado dadaalka ardayga, dadaalkiisa iyo waxqabadkiisa
Xaq u leeyahay helitaanka hagitaan waxbarasho iyo xirfadeed
Xuquuqda in la dhowro xorriyadda damiirka
Xuquuqda ilaalinta jirka iyo akhlaaqda
Xaq u lahaanshaha kaqeybqaadashada nolosha xarunta waxbarashada - raacida sharciyada-
Xaq u leeyahay helitaanka caawimaad iyo taakuleyn sax ah si loo magdhabo ceebaha iyo khasaarooyinka ka soo gaari kara dabeecad shaqsiyeed, qoys, dhaqaale ama dhaqan.
Xaqa aad u leedahay inaad hesho kaalmo qaali ah iyo taageerooyin haddii ay jiraan baahiyo waxbarasho oo gaar ah oo ka hortagaya ama hor istaagaya helitaanka ama joogitaanka nidaamka waxbarashada, heer kasta oo ay tahayba.
Xuquuqda ilaalinta bulshada ee waxbarashada
Ardaydu waxay ku biiri karaan iyagoo ku saleynaya sharciyada iyo si waafaqsan waxa sharcigu jideeyay
Xuquuqda kulanka ardayda leh xaalado ku filan xarunta
Kuwani waa qaar ka mid ah xuquuqda aasaasiga ah ee ay tahay inay ardaydu ku yeeshaan dhammaan xarumaha waxbarashada halka lagu dhigo waxbarashada dugsiga sareSidan oo kale, horumarka ku filan ee ardayda ku sugan xarumaha waxbarashada waa la damaanad qaadi karaa. Laakiin si aad u dhammaystirto macluumaadka oo aad si fiican u fahamto waxa ay tahay xuquuqda iyo waajibaadka ardayda, ha seegin qodobbada soo socda.
Imisa imtixaan ayaa la samayn karaa hal maalin sharci ahaan?
Runtu waxay tahay ma cadda. Waa xarumaha waxbarasho ee aasaasiya tirada imtixaanaadka la qaado maalin kasta. Sida caadiga ah, wax aan ka badnayn 2 ayaa la sameeyaa maalintii.
Xaq u leeyahay in si siman loola dhaqmo, iyo sidoo kale xaq u lahaanshaha in lagu daro xarunta tacliinta
Ardayda waa in loola dhaqmaa si isku mid ah iyadoon loo eegin asalkooda, caqiidadooda ama dhinac kasta. Dadka oo dhami waa isku mid waana taas waxa loo baahan yahay in lagu hormariyo xarumaha waxbarashada. Sinnaanta xuquuqda.
Xaq u lahaanshaha kaqeybgalka howlaha dugsiga (gudaha iyo banaanka xarunta) iyo adeegsiga xarumaha xarunta
Ardaydu waa inay awoodaan inay kaqeybqaataan dhamaan howlaha iskuulka ee kadhaca gudaha iyo banaanka xarunta dugsiga. Waxay u isticmaali karaan tas-hiilaadka xarunta ujeedkan oo sidaas darteed waxay dareemayaan inay qayb ka yihiin bulsho waxbarasho sida dugsigooda.
Xaq u leeyahay inuu ku raaxeysto difaac ku filan dhammaan noocyada gardarrada (jireed ama nafsi) ama ku tumashada xuquuqdooda
Dhammaan ardayda markay yimaadaan xarunta waxbarashada waa inay dareemaan badbaado iyo badbaado marwalba. Dhammaan xirfadleyaasha ka shaqeeya xarunta waxbarashada waa inay hubiyaan inay taasi dhacday. Haddii ay dhacdo inay jiraan xadgudubyo jireed ama mid nafsaani ah oo u dhexeeya dadka jooga xarunta - ardayda iyo xirfadlayaashaba - dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah waa in la qaadaa si xaaladan ay u joogsato iyo in ardayda iyo macallimiintu ay dareemaan nabadgelyo mar walba.
Xaq u leeyahay inay soo bandhigaan soona bandhigaan ra'yigooda, inay la kulmaan oo ay wadaagaan
Xorriyadda ra’yigu waa xaq aan cidna loo diidi karin. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu muujiyo oo uu soo bandhigo ra'yigiisa, inuu la kulmo oo uu ku biiro sida ku xusan qodobbada Sharciga Dhaqanka ee 8/1985 ee ku taariikhaysan 3-da Luuliyo, kaasoo ka hadlaya xuquuqda waxbarashada.
Xaq u leeyahay inuu helo tababar ku saleysan wacyiga deegaanka iyo daryeelka kheyraadka dabiiciga ah
Dhammaan ardayda waxay xaq u leeyihiin inay helaan waxbarasho iyo tababar ku saleysan daryeelka dhulkeenna. Carruurtu waa mustaqbalkeenna meerahana innagaa ku tiirsan, laakiin sidoo kale iyaga ayay ku tiirsan yihiin. Qaddarinta iyo daryeelka deegaanka ayaa lagama maarmaan ah.
Xaqa in la ixtiraamo waxa ay aaminsan yihiin iyo fikradahooda iyo in la tixgeliyo mabaadi'dooda anshaxa iyo waxa ay aaminsan yihiin
Qof kastaa wuxuu yeelan doonaa aamminaad dhaqameed ama fikrado ay tahay in lagu xisaabtamo iyo wixii ka sarreeya, waa in la ixtiraamo. Wada noolaanshaha iyo wada noolaanshaha ka dhexeeya dadka wuxuu ku saleysan yahay ixtiraam iyo isu dulqaadasho sidaa darteedna, xuquuqdani waxay ka badan tahay aasaaska bulshada aan hadda ku dhex nool nahay.
Xaq u leeyahay inaad hesho tababar tixgelinaya awooddaada, xawaarahaaga waxbarasho iyo dadaalkaaga
Dhammaan ardayda ma wada laha awood waxbarasho ama isku mid, sidaa darteed, tDhammaantood waa inay lahaadaan tababar tayo leh hadba sida ay u awoodaan ama qaafiyadooda. Si waxbarashadu u guuleysato waxay aad muhiim u tahay in la daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee arday kasta.
Intaa waxaa dheer, sidoo kale waa lagama maarmaan in xaq u yeelashada hab farsamo (sida internetka) oo loo adeegsaday habka waxbarashada taasna waxaa loogu talagalay ardayda iyo xaquuqda ay ku helayaan talo iyo tusaalayn iyadoo loo marayo jaantuska lataliyaha dugsiga ee tacliinta sare kuna saleysan fursadaha xirfadeed qaarkood.
Wax shaki ah miyaad ka qabtay ku saabsan Xuquuqda iyo waajibaadka ardayda maanta jira? Hadday sidaas tahay, noo dhaaf faallo annaguna waan ku caawin doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Noticias » Tababar » Xuquuqda iyo waajibaadka ardayda
147 faallooyin, ka tag taada
waxay xaq u leeyihiin inay hadlaan
Waxay kaloo xaq u leeyihiin inay si fiican wax u qoraan. Hadal ahaan qoraalo ahaan !! Waxna qorin
Sidoo kale ama waliba Brenda ??
Iyo Brenda-kaaga ayaa leh, inaad adiguba qortay halkii aad sidoo kale qori lahayd. Haddii noloshan kaliya aad taqaano sida loo caayo waa inaad leedahay cad.
Nadaafada Lanees Lopez dijo
Xaq ma u leenahay inaan ogaano barnaamijka maaddooyinka?
Jawaab Inmaculada Llanes Lopez
Haddii aad ku maadeysatid qaladaadkooda higgaadinta, ugu yaraan baro inaad kala soocdo »Sidoo kale» iyo »Tambuen» oo aad si fiican u isticmaasho calaamadaha dhawaaqa, ee ah inaanan gringos ahayn inaan u adeegsanno dhammaadka xukunka
Wiilkayga oo 16 jir ah ayaa loo diray guriga isaga oo wata hawlo kombuyuutar oo kala duwan.
Laakiin sababo kala duwan awgood ma lahan sida loo sameeyo. Ma haysto pc ama kaniiniga.
Iskuulku wuu sameeyaa.
Macallinkiisa ayaa u sheegaya inuusan guriga ku samaynayn.
Wuxuu ku dhici doonaa mawduuca.
Maxaan sameyn karaa?
iga raali noqo, macalinka ayaa ku qasbi kara ardayga inuu yimaado jihada hore haduusan rabin
Waxay kuxirantahay dhaqdhaqaaqa
Ujawaab eduardo ibarra
Waad salaaman tihiin, ma awoodi karaan, iyadoo kuxiran kiiska, tusaale wiilkeygu diinta ma maro
Ku jawaab Nahum
hello .wiilkeyga talaabo ayaa degan bisha Maarso, iskuulka ma xurmeeyaan meeshiisa subaxdii, wey dhaafaan galabtii, aniga ayaa sheegan kara booskiisa
Halkan meesha aan wax ku barto, macallimiinta qaar si xun ayey ula dhaqmi karaan oo waxba igama geysan, mid ka mid ahi si xun buu iila dhaqmaa oo qalbigeygu aad buu iigu dhow yahay, ma doonayo inaan u aado waxbarasho, way hadlaan, way hadlaan iyaga oo aan ka fikirin iyo iyada oo aan la ogayn waxyeelada weyn ee ay geystaan
Ku jawaab libny priscila
Haddii aad sameyn karto illaa inta uusan guriga aad uga fogeyn!
Ku jawaab Vartolomeo
Maxaad u rabtaa inaad u aragto xd? dijo
hello ma xasuusto sida loo neefsado
Jawaab maxaad dooneysaa inaad ku ogaato xd
wiilkeyga wuu fiicanyahay waxaa lagu eedeeyay wax xun macalinka markay aragtay isagoo ooyaya waxay ku tiri jooji showgaas hadii kale waan eryi doonaa
Ku jawaab xushmad
Macallimiintu ma inay ardayda siiyaan waqti cayiman oo ay wax ku bartaan si ay u awoodaan inay u qiimeeyaan ama u samayn karaan markay doonaan?
Waa ugu badnaan 1 usbuuc oo keliya
Annagu arday ma xaq baan u leenahay in aan dooranno rugta waxbarasho ee aan rabno in aan wax ku baranno?
Ku jawaab Esteban
faallo culus dijo
Waan ka xumahay, haddii macallinku cunaqabatayn ku soo rogo, tusaale ahaan, qoraal, waxyaabo doqon ama meel ka baxsan, tusaale ahaan, xayiraadda sababtoo ah ma aadan keenin wax shaqo ah markii aad runti qabatay laakiin macallinka ayaa lumiyay una maleeyay inaadan gaarsiin iyada iyo sababtaa awgeed ayaa lagugu cunaqabateynayaa, iyo inaysan dhicin hal jeer laakiin in kabadan shan jeer, in macalinkaasi kugu cunaqabateeyo wax aan meesha oolin. Aniga oo og sidoo kale in qoraalkaas ay u dhigeen ardaygaasi uu dhaawici karo buundooyinka iyo mustaqbalka waxbarasho ee qof kasta. Iyadoo la tixgelinayo in mas'uuliyiinta sarsare ay ansixiyeen qoraalkaas, iyadoo aan loo eegin meesha ay ka ahaatay meesha. Macallinkaasi miyuu ku xadgudbayaa xuquuq kasta oo uu leeyahay ardaygaas?
Ka jawaab faallooyinka halista ah
Dugsigeyga waxay hormariyaan taariikhaha imtixaanka ee maaddooyinka hore, ma noqon karto, waxaan haystaa waqti iguyar oo aan wax ku barto, waxay dejiyeen taariikh noqonaysa 26-ka Diseembar, maantana waxaan u aaday inaan codsado rukhsadda imtixaanka waxaanan la kulmay inaan sii 18-ka! maxaan sameeyaa markaa? wax xuquuq ah ma leedahay?
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado heerka macalinku u caynayo ardayga oo uusan u oggolaan inuu u gudbo fasalkiisa
Sannadkii hore dalacsiinta ayaa loo tiriyaa inay xaq tahay?
Ku jawaab dani
hadaad xisaabta ku darsato
aaa loas macalin maahan inuu ku aflaxo se heee
Wiilkeygu wuxuu kujiraa sanadkii 4aad ee ESO waxaana laga cayriyay machadka mudo 7 maalmood ah isagoo dalbaday inaan baro macalinka diinta maadama uu macalinku sheegay in lajoojiyay oo wiilkaygu sheegay inuu laqaatay 5, macalinka. wuu diiday wiilkaygiina wuxuu bilaabay oohinta isagoo leh waxaan u imanayaa inaan la hadlo agaasimaha, macalinka ayaa fuulay difaac isaga oo macalimiinta qaarna yimadeen ugu danbayntiina cida la eryay waa wiilkaygii macalinkuna wuxuu bilaabay inuu qoslo maxaa yeelay wuu guuleystay. Waxaan u maleynayaa in ciqaabtu cadaalad daro ahayd, waxaan jeclaan lahaa in qof ii sheego waxa aan sameeyo.
Ku jawaab Pilar
waad u sheegi kartaa golaha waxbarashada
In kasta oo faalladaydu ay waxyar soo daahday
Jawaab si aad u kiraysato
Gabadhaydu waxay u tagtay inay qaadato juqraafiga saddex jeer macallinkuna ma ansaxin, waxay hore ugu tidhi iyada waa inaad timaadaa 8 jeer waxaan u tegey inaan la hadlo agaasimaha waxayna ii sheegtay inaanay macallinkeeda beddeli karin, runta ayaan ahay ma aqaano waxa la sameeyo. Imtixaanku isla maalintii uu awowgiis dhintay waxaan u tagnay inaan la hadalno agaasimaha runtiina waxba ma uusan xallin waana iskuul diineed ma aqaano waxaan sameeyo
Jawaab AN RODRIGUEZ
U sheeg macalinka wixii uu ku sameeyay ilmahaaga
Ku jawaab Grabiela
Wiilkeygu kuma raaxeysanayo fasalka maxaa yeelay dhaqanka asxaabtiisa waa mid laga cabsado.Ma leeyahay xaq uu u leeyahay inuu beddelo fasalka?
Ku jawaab luz valer ccahua
Waad salaaman tihiin, gabadhaydu waxay ku jirtaa sanadkii 6-aad ee dugsiga sare, sanadkii hore waxay go aansadeen inay galabtii ku qaataan iyada oo u jawaabaysa macalin si xun, maamulayaashuna waxay ii sheegeen in hadii ay dhaafto iyadoon wax maaddo ah qaadan dhibna aan lahayn ay badbaadin doonaan boos banaan subaxdii, Maanta wuxuu shaqeynayaa 15:21 pm ilaa XNUMX:XNUMX pm mana soo xaadiri karo galabta, qaado cadeynta shaqada waxayna ii sheegeen inuu sugayo inta wiilasha kale ay bixinayaan si loo arko hadii waxay ahayd mid banaan oo ku saabsan shaqada berri, ma ixtiraamaan waxa la yidhi, iyo Fasalada ayaa bilaabmaya maanta shaqo joojinta ka dib oo cidina iima soo wacayso si aan u ogaado inay berri aadi doonto iyo in kale, laakiin waxay ii sheegeen inaan beddelo dugsigeeda. jeclaan lahaa inaan ogaado haddii iskuulku waajib ku yahay inuu tixgeliyo kiiska oo dib ugu soo celiyo shaqadiisa berri, haddii kale maxaan sameeyaa, mahadsanid
Ku jawaab lorena
Waxaan weydiinayaa, macallinkayga falsafadda in badan buu nagu qayliyaa laakiin ereyo xun ma adeegsato, ma sharci darro baa?
Ka jawaab qoraxda
Waad salaaman tihiin hadii aan dhib ku qabo macalinkeyga, sideen ku xallin karaa? Waxay dhahdaa edeb daro badan, waxay si macno leh u soo jiiday timaha ardayda, waxay dhahdaa edeb daro, waxayna ceebeysaa qof sifiican ula muuqda kooxda, runti waxay igu bahdisay dhamaan asxaabteyda fasalka hortooda, iyo markuu saaxiibkey doonayo inuu i taageero , Sidoo kale waan ku qayliyey oo waxaan usheegay waxyaabo, waa inay ka aargutaa marka uu mid la murmo, qiimeeyo kala duwanaanshaheeda kala duwan, tusaale ahaan waxaan u jeedaa inaan had iyo jeer la hadlo, oo aan joojiyo meeshayda, laakiin ma ahan sababta oo ah inaan doonayo, haddii kale in aan ahay buun buunin, macallinkana ay igu keento sida ay ii sheegto, si ka duwan ayaan kuu qiimayn doonaa, haddii aad joojiso ama aad hadasho, waan ku canaananayaa, waana iga caddaalad darro maadaama ay jiraan dad hadal intaa ka sii badan oo aan xitaa ku qayliyo oo sameeya waxay rabaan, ma shaqeeyaan oo hadaanay wax dambe usheegin, maxaan sameeyaa?
Ardaydu waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan kulan lala yeesho agaasimayaasha, waalidiinta iyo guddiga wada shaqeynta si loo arko waxa lagu sameeyo lacagta iskaashatada, sababta oo ah hay'adda ay ku sugan tahay xaalad liidata, waa iskuul farsamo mana haysano qalab.
Qalabka ka sokow, musqulaha waa karaahiyo.
Wadashaqeeyaha machadka ma ka koobnaan karaa dhammaan macallimiinta firfircoon?
Raali noqo, kaaliyaha maamulaha wuxuu xaq u leeyahay inuu ku qayliyo ardayda
Ku jawaab jawred martinez
Haye, waxaan ku jiraa sanadkii 5aad ee dugsiga sare waxaanan leeyahay macallin doorbidaya qaar ka mid ah asxaabteyda fasalka maxaa yeelay waxay leeyihiin magacyo muhiim ah ama waalidkood waa macallimiin iyo asxaabteeda fasalka, iyo ardayda kale, annaga ma nihin, kuwaas oo aan haysan wax nooca ah oo aynu nahay «Caan ah» waxay na siinayaan calaamado ka hooseeya 6 buugga xusuusta, tusaale ahaan waxaan helay 9 imtixaanadii sanadkii la soo dhaafay waxaanan ku qoray 6 buugga xusuusta ah iyo kuwa kale ee dhibcaha ka hooseeya ama aan waxba qabanayn. oo uu ciyaaro 8, wuxuu su'aal ka qabaa inaan fasalada ka boodno mararka qaarkood, laakiin dhab ahaantii iyadu way maqantahay sanadka intiisa badan waxayna bedeshaa bedelkeeda waxaanan la helnaa darajooyin wanaagsan iyada oo markii macallinka yimaado ay dhigto buundada ay rabto ... runta ayaa ah macallimiinta iyada oo kale ah ma doonaysid inaad dhigatid dugsiga lagu takooro ... waxaan kaa jeclaan lahaa ra'yi adiga kaa imanaya
Waad salaaman tihiin, wiilkaygu wuxuu ku jiraa fasalka 2aad. dugsiga sare, laakiin wuxuu hayaa dhibaato sambabada ah, aad ayuu u mashquulsan yahay, waxaan mar hore la dawaynayaa cilmi nafsi, dhakhtar cudurada maskaxda waxaanan sugayaa in la ii wareejiyo dhakhtarka neerfaha, ku dhowaad dhammaan macallimiintu way igu taageereen qiimayntiisa, laakiin macalinka xisaabta Xaqiiqdii, kamuu hadlin in aan bixiyo lacagteeda si loo ogaado oo sanadkii la soo dhaafay waxay u dhacday si aan caadi aheyn iyo talaabada seddexaad, laakiin hada macalinka wuxuu u sheegay wiilkeyga inuu hubin doono hadii ay baajin karaan imtixaanka inuu laga soo gudbay wax aan caadi ahayn, waayo Taasi wuxuu u maleynayaa inuu laaluusho.Dhibaatadu waxay tahay inuu wax walba ku dhaho wiilkeyga, oo markasta oo aan aado waxba iima sheegayo, waa macallin dulmi iyo edeb daran, maxaan sameeyaa?
Ku jawaab monica
Waad salaaman tahay waxaan jeclaan lahaa inaan su'aal weydiiyo! Maxaa dhacaya haddii dugsigu ku xadgudbo xuquuqda ardayda? Maxaase la samayn karaa si laysku dayo in la saxo?
Kiiskeyga, waxay ku xad gudbeen xuquuqdeyda aniga ah Arday ahaan (–Xuquuq inay ku raaxeystaan ​​ilaalin ku filan dhammaan noocyada gardarada ah (mid jireed ama mid maskaxeed) ama ku tumashada xuquuqdooda)
Ku jawaab Naty
Waa salaaman tahay, gabadhayda waxaa lagu eedeeyey inay furayaasha qaar ka xaday macalin markii ay ka heleen arday kale maamulaha ayaa ka eryey iskuulka waxayna ku noqotay inay dhameysato dugsiga sare mar kale maxaa yeelay waxaan la hadlayaa xoghayaha dugsiyada sare markay soo noqoto. macallimiinta oo dhami waxay u sheegaan inuu iskuulka ka dhamaaday maxaa yeelay wuxuu la kulmayaa aflagaado badan xitaa kaaliyaha maamulaha mana jiro qof aaminsan waxa ay sheegaan ilaa ay masuuliyiintu ilaalinayaan macalimiinta isla markaana ay qaataan sanadka ugu dambeeya wuxuu diidayaa isdiiwaangalinta isagoo leh Golaha ayaa go'aansaday cayriso iyada oo dhinac iska dhigaysa ardayda
Jawaab Suhail galindo
Waa salaaman tahay, gabadhayda waxaa lagu eedeeyey inay furayaasha qaar ka xaday macalin markii ay ka heleen arday kale maamulaha ayaa ka eryey iskuulka waxayna ku noqotay inay dhameysato dugsiga sare mar kale maxaa yeelay waxaan la hadlayaa xoghayaha dugsiyada sare markay soo noqoto. macallimiinta oo dhami waxay u sheegaan inuu iskuulka ka dhamaaday maxaa yeelay wuxuu la kulmayaa aflagaado badan xitaa kaaliyaha maamulaha mana jiro qof aaminsan waxa ay sheegaan ilaa ay masuuliyiintu ilaalinayaan macalimiinta isla markaana ay qaataan sanadka ugu dambeeya wuxuu diidayaa isdiiwaangalinta isagoo leh Golaha ayaa go'aansaday cayriso iyada oo dhinac u jeedineysa ardayga
Waad salaaman tihiin, waxaan ahay arday dhigta dugsiga sare ee 3aad iskuduwaha tacliinta ee dugsigayga sidoo kale waa macalin macalin farshaxanimo iyadoo intii ay na siinaysay casharro farshaxan ah ayay noo sheegtay inaad rabto inaad sare u qaaddo heerka ardayga waana sababtaas sababta ay ugu badaleen gudbinta uguyaraan 6 ilaa 8, sidoo kale wuxuu yiri hadaanan 8 gaarin maheleyno shaqooyin aan caadi aheyn ama siyaado ah, wuxuu yiri hadaanan gaarin 8, oo ah tan uguyar, waxaa nalaga saari doonaa iskuulka. sameeyey? Oo miyaan sii joogi karnaa ka dib marka dugsiga laga eryo iyo shaqada guriga laga nasto? Laakiin waxay nagu qasbayaan inaan sii joogno sababta oo ah ma rabno
Ku jawaab walter
Waad salaaman tihiin, anigu waxaan ahay arday dhigta 2 dugsiga sare ... dhib malahan aniga, haa ma ahan macalin, maamule ku xigeen cusub ayaa yimid, laakiin way ku liidataa dhinaca ay markhaati been ah ka keento macalinka. .. Dugsiga intiisa badan ayaa markhaati ka ah waxa maamule ku xigeenku ka yiraahdo fasaladeeda, dhaqanka macalinka waa BEEN, fasalkaygu wuxuu naga soo ururinayaa saxiixyada anaga iyo waalidiinta, waxaa taas ka sii daran waxaan rabaa inaan ogaado sida ka saraysa iskuulka uu xuquuqdayda ugu xadgudbi karo wuxuu garwaaqsanayaa inaan ahay qofkii ay saxiixyadu bilaabeen cinwaankana waan wacay ... waxaan rajaynayaa wayna i fahmeen ...
Waad ku mahadsantahay jawaabtaada sida ugu dhaqsiyaha badan ... Mahadsanid ...
Dugsi sare oo ku yaal Iztapalapa, macallin ayaa ardayda ka iibiya ilaalin, ereygiisa ayaa ka ansax badan kan maamulaha laftiisa, waxaan ka baqayaa aargudasho ka dhan ah gabadhayda, haddii aan tan kala hadlo mas'uuliyiinta u dhiganta.
Intaas waxaa sii dheer, macallin ayaa ugu hanjabay ardayda inay siinayaan imtixaan aan caadi ahayn si aan qofna u baasin oo uusan u siin buundooyin sababtoo ah cidna ma marin, sida ay sheegtay, markii ay weydiinaysay hoosaadka dugsiga, waxay igu wargeliyeen in yar ay gudbisay laakiin waa inuu ardaygu weydiiyaa, maahan macallimiintu. Waxa ugu xun ayaa ah in aqlabiyaddu ay aamusnaato maxaa yeelay maamulka iyo maamul hoosaadkuba way is dul saaran yihiin xaaladan. Maxaan sameyn karaa, maxaa yeelay gabadheyda ayaa dhahday yaan wax la oran, si aysan iyadu uga hor imaan?
Jawaab Victoria Melendez Barbosa
SALAAN: gabadhaydu waxay dhigataa sanadka 4aad, shalay macalinku wuxuu ii soo diray qoraal, wuxuu igu yidhi gabadhayda waxaa la siiyay 1 x oo ay ku qabanayso cashar guri oo maaddo kale ah, in bishii hore ay diiradeeda soo jiidatay x isku mid. Waxaan rabaa in aan ogaado haddii ay u dhigantaa in iyada loo qalmo sida x wax ay xisaabiso oo ay samaynaysay. Marna ma weydiinin iyada shaqada ay siineyso, si uu u arko inay qabaneyso iyo in kale. Uma adkaysan karto gabadhayda oo xilligan oo kale xilligan oo kale gebi ahaanba iyada ayay dhaawaceysaa in aan sameyn karo. Fadlan si deg deg ah iiga jawaab. Waxaan dareemayaa ciirsi la’aan iyo impeccive marwalba waan taageersanahay macalinka caruurtiina waa la eedeynayaa sababtoo ah ma yaqaanaan sida ay isu difaacaan.
Ku jawaab vilma
Miyaa ardayga looga eryi karaa uruurinta warbixino kala duwan? Marka miyaad lumisay xuquuqdaada inaad sii wadato waxbarashada?
Ku jawaab Rossy
Waad salaaman tihiin, magaceygu ​​waa Julian waxaan kujiraa sanadka koowaad ee dugsiga sare, waxaan hayaa macalin xisaabta jecel inuu dhib raadsado, maalmahan kale waxay tuureen tisas waxayna isku kharribeen dharkaygii waana la i cunaqabateeyey waxayna igu tidhi in ay sameyn doonto wax walba oo macquul ah si ay iiga riixdo xasiloonida.
WAA SALAAN KELIYA Waxaan RABAA INAAN YIDHO HADII AY MACALIMIINTU KUGU QAATO MAJADAADA, MAXAAN SAMEEYAA
rosemary sanchez cruz dijo
Waa salaaman tahay, waxaan rabaa inaan ogaado haddii dugsigu uusan rabin inuu qoro ardayda aan akhlaaqda wanaagsan lahayn
Ku jawaab rossemary sanchez cruz
IYO ANIGA dijo
HADII UU MASIIX KU QAADO QOFKA MAXAAN SAMEEYAA
Waxaan u maleynayaa in si loo helo dugsi sare oo wanaagsan ay tahay inay sameeyaan sidii gole ardey si ay u horumariyaan dugsiga, si fudud ayaan u hadli karaa oo waxaan ku muujin karaa si aad u wanaagsan, haddii aan agaasime ahaan lahaa waxaan beddeli lahaa firfircoonida waxbarashada, maxaa yeelay arday waan ogahay in iskuulku yahay mid lagu caajiso oo lagu daro qaangaarnimada maxaa yeelay waxa qofku doonayo ayaa noqonaya, waxaanan leeyahay saaxiibo badan oo aan isku fasal nahay oo aan jeclayn sida ay wax noo barayaan, mararka qaar xitaa macallinka xitaa ma fahmayo waxa uu sheegayo, kuwo kalena waa jiraan oo aan noo sharraxin oo aan cidina ku qanacsanayn taas :(
Iyo mid kale, waxaan ula jeedaa, waxay rabaan waxbarasho tayo leh iyo waxa tayada ah ee aan la siinin dowladda, waxaa jira caruur dhulka fadhiista, kuwa kale oo aan haysan buug oo arki doona solonka ama raba inay aadaan iskuul inay bixiyaan :( iyo sidoo kale waxaan heli doonnaa waxbarasho tayo leh
Ku jawaab Karla ibarra
tusaale ahaanna waxaan qabaa dhibaato ah inaysan ii qiimeynin sida ardayda kale ee aan sameyn karo I. ama cidda aan u noqon karo
Waa salaaman tahay, su'aal baan qabay, ardaydu xor bay u noqon karaan inay xiriir ku yeeshaan dugsiga.
maxaa yeelay la-taliye markasta oo ay aragto iyaga oo dhunkanaya wuxuu u qaadaa kan
Haddii aan qaato maaddo oo uu macallinku ii haysto dhibic intaas ka badan oo aniga i khuseysa, waxaan u baahanahay hal dhibic si aan uga gudbo. Ma sheegan karaa inaan qaato macallin kale?
Ku jawaab Damian
araceli saytuun lopez dijo
Ilaa maanta, waxaan codsanayay sanadka ugu horeeya ee codbixinta dugsiga sare ee gabadhayda mudo 8 bilood ah rugta ganacsiga ganacsiguna waxay ku xad gudubtaa xuquuqdeeda ardayga maadaama sepku uusan waxba qabanaynin oo ay si dhib yar i siiyaan macluumaad aanan aqoonsanayn sanadka ugu horeeya. in la sameeyo Xaaladahan oo kale, muddo aad u dheer ka dib ma ahan wax sax ah in la sameeyo, aad ayey uga yar tahay waxa saxda ah in la sameeyo, maadaama ay hadda ku jirto fasalka labaad
Ku jawaab araceli olivares lopez
Maxaan sameyn karaa hadii macalinka xisaabta uu ku guuldareysto wiilkeyga qiimeynta labaad sida ay iyada tahay maxaa yeelay ma aanan siin wax miisaan ah, xitaa anigoo og in wiilkeyga uu shil ku dhacay oo uusan socon karin. Imtixaanku wuxuu qiimihiisu ahaa 60% wiilkayguna wuxuu helay 58% darajadaasna isaga ayaa ka tagay. Dhibaatadu waxay tahay inay hadda codsadeen qiimeyn jaango'an oo loogu talagalay ardayda dhigata dugsiga sare dhammaan ardaydiina oo uu ku jiro wiilkaygu wuu ku dhacay. Ma ihi cadaalad ama anshax ama xirfadle macalinka iyo maareeyayaasha oo u ogolaada ardayda oo dhan inay ku dhacaan maado. Muxuu markaa macalinku u shaqeeyay muddadii labada bilood ahayd ee uusan ardaygu ka gudbi karin maaddada? Intaa waxaa dheer, sida ku cad heshiiska 696 ee loola jeedo qiimeynta iyo aqoonsiga ardayda, macallinka waa inuu dalbadaa mashruuc u oggolaanaya ardayda inaysan inaad ku dhacdo oo aad ka soo kabato darajooyinka.
Ku jawaab patyy
Gabadhaydu waxay dhamaysay sanadkii 6aad ee dugsiga sare waxayna lahayd mawduuc ay si xun u bixisay hadda Febraayo, miiska soo socda ayaa la siin doonaa iyada oo laga bilaabo Maarso 15, laakiin iyadu waxay haysataa wakhti ay ku qorto cbc illaa 13 Maarso. Ma ka codsan karaa miiska taariikhdaas dugsiga?
Ku jawaab sxab
Xagee ka warbixin karaa borofisarka?
Ku jawaab Ivanei
Subax wanaagsan, waxaad ku qasbi kartaa wiilkayga inuu beddelo isbeddelada markii uu leeyahay dabeecad aad u fiican, ixtiraama labiska oo uu yeesho buundooyin fiican, isagoo qiil u leh inay koorsooyin badan ku jiraan oo ay raaf ka sameeyeen isna wuu iska tegey. mahadsanidiin kahor !!!!
Jawaab Analia Veronica Gavilan
Mucjisooyinka Belen Silva dijo
Waxaan aadayaa sanadkii labaad ee dugsiga sare macalin ma bari karaa arday isagoon maqal sheekadiisa?
Jawaab Milagros Belen Silva
qalcaddii garsoorka dijo
I CAAWI AYAY I XANUUNSANAYAAN WAQTI MAALIN AYAAN KU CODSANAYO XAQA QARINIMADA.
kiisku wuxuu ku bilaabmay sidan: si fiican maalin uun ayay macalimiinta yimaadeen oo baadheen boorsooyin dhab ah macalinkuna wuu iga qaaday taleefankayga gacanta.
Haddii uu soo gaadhay boorsadayda, wuxuu ku xadgudbayaa xuquuqdayda gaarka ah wuxuuna sidoo kale la wareegayaa taleefankayga gacanta illaa iyo maanta iyagu iguma soo celiyaan taleefankayga gacanta.
Jawaab Juder Castillo
Waxay sii hayeen wiilkeyga oo ku sugaya holl albaabka dugsigiisa, umana ogolaan inuu galo fasalkooda, maxaa yeelay ma uusan jarin timahiisa (nooca iskuulka, sida ay yiraahdaan), marka xaqiiqda ay rabaan inuu isu jaro sida nin ciidan ah.
Xaqiiqdu waxay tahay inuu seegay laba saacadood oo fasal ah, isagoo sugaya, haddii ninkeygu uusan dugsiga aadi lahayn, waxay u badan tahay inuu maalintaas qaadan lahaa isagoon fasalkiisa gelin (fasallo la’aan). This Maxaa lagudboon xaaladan? Timo jarista fudud uma ogola ardaygu inuu fasalkooda soo galo… ..
Jawaab LIDIA MARILU GUTIERREZ CABEZUDO
Xaqa in loo maqlo
Ku jawaab lizs
Wiilkaygu wuxuu aadaa dugsiga sare halkaasna wuu ka bilaabaa, agaasimuhu wuxuu kula hadlaa caleemaha haddiise mid sheegto inuu ka helo dhalinyarada ma doonayo inaan la hadlo tan iyo markii uu wiilkaygu ka baxay sannadkan ka dibna haddii aan ku dhejiyo ma warqado isii
Ku jawaab Carmen pichardo
Hal su'aal: maaddo aad baan uga maqnaa wax badan, laakiin marwalba waxaan ku fiicnaa fasalada 8, ma qaadan karaa maadada maqnaashaha? Mise waxay tirineysaa waqtiyadii aan soo maray iyo darajadayda? Mahadsanid
Ku jawaab Micaela
Micaela, hadii shaqada lagaa joojinayo, waxaan hayaa saaxiib igu seegay qalliin kelyaha ah oo ay waxbartay laakiin wali way kufashilantay maxaa yeelay ma hayaan qoraallo iyo qoraalo ku filan oo ay ku ansixiyaan ……. Taasi waa waxa aan u malaynayo
Waan diidi karaa inaan saxeexo ogeysiiska xisbiga
Fadlan caawi my Inantayda fasalka 1aad mala ceyrin karaa timaheeda buluuga ah? Kaliya waa talooyinka. Maxaan sameyn karaa Waxaan u maleynayaa in qofna uusan dhibsanin taas oo iyadu waa arday wanaagsan oo aan lahayn anshax iyo dhibaato xagga fasalka ah
Ku jawaab Claudia Gomez
Macluumaadka loogu talagalay dugsiyada sare habeenkii iyo ka warbixinta xadgudubka ardayda
Jawaab Beto Anaya
Ardaygu xaq ma u leeyahay lahadal asxaabta? AQOON LA'AAN Macallimiintu waxay u maleynayaan maxay yihiin lamaane ????
Haddii qeybtu aysan jecleyn macallinka Isbaanishka, macallinka wax ma laga beddeli karaa?
Jawaab Alan Ramírez
Waa salaaman tahay, waxaan ku jiraa fasalka tobnaad. Muddo bil laga joogo markii aan soo galay dugsiga, waxay sameeyeen isbeddelo gaar ah oo aniga i saameeyay, mid ka mid ah waa inay beddeleen qolkayga ka dib markay noloshaydii dugsiga oo dhan la qaateen asxaabteydii fasalka ila dhiganeysay ee ku sii jiray koorso kale, sidee baan u sheegan karaa lagu wareejiyay inta lagu gudajiray tababbarkayga tacliimeed oo dhan?
Ku jawaab Camilo
Waad salaaman tihiin, tan waxaa lagu qasbay in aan badalo shaqadeyda, koorsada iyo dhismaha kaliya sababtoo ah "ma banaana boos intaa ka badan." Goorma bilowgii ay ahayd inay keydiyaan booskayga banaan, waxaan ku jiray dugsigaas saddex sano oo isku xigta. Dabeecaddaydu waa mid la aqbali karo, kama haysto cabasho macallin, labiskaygu waa ku habboon yahay waana la i oggolaaday wax walba. Haddii aanan khaldamin, tani waa xaq aan u leeyahay inaan dalbado isbeddelka subaxa iyo dhismaha, laakiin halkee? Taasi waa, xaggee aadaa si aan u sameeyo cabashadayda?
Ku jawaab Geraldine
Waad salaaman tihiin. Gabadhaydu waxay leedahay juqraafiyad tii hore ee 5aad, waxay ka qalin jabisay 2014, waxaan ka nimid caasimada Cba halkaasoo dugsiga sare uu yahay 6 sano jir. Waxaan ku soo bandhigayaa shaqooyin wax ku ool ah 6-da oo uu diiday Professor-ka anigoon sharraxaad ka bixin ama tusin. Markay tahay 20 gabadhayda wali ma dhaafi karto maadadan. Su’aashaydu waxay tahay: macallin miyuu ku dhici karaa arday intaas oo jeer bilaa sabab la’aan?
Jawaab Carmen Acedo
Waxaan si deg deg ah ugu baahanahay inaan ogaado waxa la sameeyo, aad baan uga walwalsanahay, waa inaan ka kaxeeyaa gabadheyda iskuulkii ay aadeysay duruufo dhaqaale awgood, ma doonayo inay ka maqnaato sanad dugsiyeedka, waxay leedahay simistar bidix inaan dhammeeyo dugsiga sare, maxaan u baahanahay inaan sameeyo ama sideen ku caawiyaa
Waa wax iska caadi ah ama loo oggol yahay ardayga dhigta dugsiga sare ee sannadka labaad ee haysta toddobaad iyo maalmo fasalka in loo beddelo qolal aan dhib lahayn oo horeba wax uga baran jiray machadka muddo shan sano ah.
Jawaab Jaime Saavedra
Waa salaaman tahay, waxaan rajaynayaa inaad ii jawaabi doontid ... Waxaan ku hayaa wiilkayga dugsiga oo durbadiiba baranaya dugsiga sare ee 2aad ... Tanna, wuxuu ku jiray machadkaas muddo 5 sano ah ... sababta walaacdayda ... waa xaqiiqda ah in markii horeba ay haysteen 3 usbuuc oo fasalo ah waxay u badaleen qaab kale oo is barbar socda iyagoon ii sheegin sababta ama sababta lafteeda ...... wuxuu leeyahay waxkasta oo daboolan daboolida farxada leh iyo shaqooyin badan oo guriga iyo casharro horay loo beeray .. maxaa yeelay hay'addaas waxaa jira 2 cilmiga jaamacadeed oo aysan iyagu isku siinin ... aad u taxaddar
Waxaad dareemeysaa jahwareer iyo dabcan niyad jab… .waxaana macalimiinta kaliya ay dhahaan si aan u arko sidaad uqabsato… Waxay iga yeeleen inaan saxiixo warqad aan ogahay inay badaleen …… laakiin waxay cadeeyeen inaan xanaaqsanahay. kabaha qaar bay ahaayeen ... i caawiya waxaan u baahanahay hanuunin maxaa yeelay waan ka maqanahay ... way samayn lahaayeen bilowgii
Aad ayaad u mahadsantahay….
Ku jawaab Rossana
Waad salaaman tihiin, waxaan ahay arday dhigta fasalka 11-aad marki iigu horaysay waan ku soo daahay iskuulka macalinkayguna ma ii ogolaanin inaan galo waxaan rabaa inaan ogaado hadii ay jiraan qodobo ama sharciyo naga taageeraya kiisaskaan, mahadsanid Waxaan rajeynayaa jawaab deg deg ah
Jawaab Juan Pablo
Noel waxaa qoray Ciise Mares Valadez dijo
Waad salaaman tihiin, dhibaatadaydu waxay tahay waxaan ku dhacay farshaxanka waxayna durbaba iga codsadeen laba mid oo aan caadi aheyn macalinkuna wuxuu la imaanayaa marmarsiyo kale oo ah inaan qoob ka ciyaaro bisha Janaayo oo aan horeyba u waayey diiwaangelinta dugsiga sare ee dugsigan sare, way xishoodeen Ma bixinayo shahaadada waxaan haystaa laba walaalo ah oo aan samayn Waxay sidoo kale galeen dugsiga sare maxaa yeelay waxay carqalado fara badan ku hayeen ninka aan caadiga ahayn, macalinka farshaxankuna waa gabadha agaasimaha, uma maleynayo inuu igu dhiiri gelinayo shahaado. Mahadsanid
Jawaab Noel de Jesus Mares Valadez
jorge eliecer daacad wheats dijo
Waa hagaag, sanad iyo badh ka hor arday ayaa la kulmay shil baabuur halkaasoo aabaheed, hooyadeed, iyo mid kale ku dhinteen, gabadha 15 jirka ah xaaladdeedu way liidataa, wax badan ayaa la qabtay laakiin soo kabsashadu way gaabis tahay, sanadkan iyada ardayda fasalka ka qalin jabineysa, machadka ayaa doonaya inuu sameeyo aqoonsi. su'aashu waxay tahay iyada iyo aabbe oo isku duwe ahaa. su’aashu waxay tahay aqoonsi ama aqoonsi noocee ah ayaa loo samayn karaa gabadha? Waxaan sugayaa jawaabtaada
U jawaab jorge eliecer wheats daacad ah
Qofna Solanye Bernabé Dueñas dijo
Waxaan ahay hooyo quus ah, xuquuqda wiilkeyga waa lagu xad gudbayaa, yaa maanta kujira sanadkii labaad ee cilmiga kombuyuutarka, oo ay ku qaldeen inay ku qoraan Saynis sanadkii hore ilaa maantana aysan sixin karin qaladka Maxaa ka go'an Xoghayaha Dugsiga maxaa yeelay nidaamkan cusub ee waxbarasho dugsigu wuxuu mas'uul ka yahay inuu ka qoro takhasuska ay doortaan sannadka tobnaad, waalid ahaan hadda ka dib ma samaynayno nidaamyadan, waxaan ogaaday tan iyo bilowgii sanad dugsiyeedka 2015 _2016 Waxaan kalay arji machadka iyo degmadaba xalinta dhibaatadaas aniga, waqtigu waa iga gudbayaa ma garanayo waxa dhici doona markuu wiilkeygu galo sanadka saddexaad ee dugsiga sare mana sameyn karo layliyo maxaa yeelay kama muuqan koorsada uu isagu yahay iyo xaaladdan oo dhan waxay abuurtay raaxo shucuureed iyo mid maskaxeed maxaa yeelay takhasuskii uu doortay, oo ah cilmiga kombiyuutarka, lama ixtiraamin
Jawaab Nobody Solanye Bernabé Dueñas
Sababtoo ah wiilkeyga waxaa loo diiday inuu iska diiwaangeliyo dugsiga sare ee libertador ee Acarigua, gobolka Boortaqiiska, kaliya maadaama uu shan iyo toban jir yahay oo uu wax ka baranayo dugsigaas oo uu shan iyo toban u beddelay halkaas oo uu wax ku baranayo haddana hadda markaan dib u qoreyno , Agaasimuhu wuu diiday inuu dib u diiwaan galiyo maxaa yeelay shan iyo toban sano ayuu jiraa, wuxuu yidhi waa sharci cusub, taasi waa ta aan jeclaan lahaa in shakigaas laga saaro, cunuga, gabadha ama dhalinyarada, ma leeyihiin xaq u leeyahay in aan waxbarto, haa ama maya, maxaa yeelay waxaan ogolahay in aan dhaqan geliyo sharci ah in cunug aan wax baranaynin oo shan iyo toban jir ah, waxaan aadey inaan raadsado meel sanadka ugu horeeya wayna u diideen da'tiisa darteed, laakiin a Ilmaha wax ka barata dugsigaas shil ayuu galay oo laba laab baa ka dhacay macallimiinta iyo agaasimuhuna waxay igula talin doonaan inay fiicnayd in sannadka lagu celiyo waanan aqbalay haddana way iga tageen markaa dib uma diiwaangelin karaan sababtoo ah a Sharciga cusubi ma ogola waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado hadii taasi cadaalad ka tahay wadankan oo loo malaynayo inaan joojinayno akhris-qoris-qoris anigu waxaan ahay MiguelPerez iyo wiilkaygu waa Jose´ Gregario Perez wuxuuna wax ku baranayay dugsiga sare ee Libertador de Acarigua halkaas oo ay diidaan inay dib ugu qoraan.
Jawaab Miguel Perez
Waana ilaaway inaan dhaho wuxuu lumiyay labada Laps sababtoo ah wuxuu la kulmay shil uu aadayay dugsiga sare shan maalmood kadib markii uu bilaabay sanad dugsiyeedka waxayna ahayd inay ku sameeyaan qalliin deg deg ah maskaxda xarunta caafimaadka ee Los Cedros de Acarigua waxayna qaadatay shan maalmood. Miyir beel ayay ku jirtaa waana sababta igu kaliftay inaan ku celiyo oo aysan rabin inay aqbalaan. Aniga oo og waxa dhacay, iyo in aan hayo caddeyn wixii dhacay, waxaan jeclaan lahaa Jihaynta arrintan la xiriira, waxaan ahay Miguel Perez iyo wiilkayga Jose Gregario Perez.
Miyay iga mamnuuci karaan inaan u dhowaado saaxiibkay gudaha dugsiga?
Ku jawaab jenny
Sergio Alejandro Gonzalez sawir qaade dijo
Habeen wanaagsan waxaan aadayaa iskuul habeenkii ah oo la yiraahdo CENS 239 Waxaan dhameeyay sanadkii 2aad ee 2015 waxaana ku aflaxay bilaa waajibaad, waxaan qaatay dhamaan maadooyinka bishii Disembar waligood ma dhaafin darajooyinka waxaanna 2016 kaqeyb galay 3aad sanadkii ugu dambeeyay ee aan uga soo tagay dhibaatooyin shaqsiyadeed iyo maanta ma helayaan qoraaladayda oo sheegaya inay igu leeyihiin 4 maaddo oo aan hore u qaatay madaama oo ayna helin wax warqad ah oo aniga ah ama tii ugu horaysay ee ay rabaan inay i siiyaan suurtagalnimada inaan dib ugu noqdo sanadka 1aad bilowgii ugu badnaan laga bilaabo sanadka 2aad ee aan sameeyo cidda aan sheegto waan ku mahadin doonaa jawaabtaada ma haysto waqti aan ku bilaabo dugsiga sare mar labaad waxaan rabaa inaan dhammeeyo waa inaan ku jiraa sannadka ugu dambeeya
Jawaab Sergio Alejandro Gonzalez
Waad salaaman tahay, waxaan ahay aabe gabar ah oo dhigata sanadka 3aad ee ESO xaafada Valencian waxaana dhowr sano aan ku arkay khaladaad badan oo ka dhaca machadka ay gabadhaydu dhigato, khaladaadka ku xeeran shaqaalaha waxbarista iyo ku dhaqanka xarunta. . Tusaale ahaan macallimiinta qaar waxay si bareer ah ugu hanjabaan ardayda, hanjabaad toos ah, "ama shaqadaas oo kale ayay ku qabtaan guriga, ama toos baa loo laalay ...", ama haddii ay dhacdo shaqo joojin guud waxay ugu hanjabaan inay laali doonaan haddii ay taas sameeyaan maalinta shaqo joojinta (oo ay xaq u leeyihiin sharci ahaan). Aniga aragtidayda waa hanjabaad iyo jujuub, caruurtuna waxay u sheegaan macallinkooda, laakiin way is daboolaan aakhirkana kuwa kaliya ee ay khusaysaa waa carruurta.
Laakiin kiiskii ugu dambeeyay ee aan horay u arkay waa mid xad dhaaf ah oo xad gudub ah, hada waxay qabteen tartan sawir ah oo ay la galeen shirkad ka baxsan xarunta (FOTOPRIX) taas oo AY KU QASBAN YIHIIN INAY KA QAYBQAATO, iyada oo loogu hanjabayo in laga shakiyo haddii aydaan sameynin, sidoo kale lagu qasbo si loogu muujiyo qaar ka mid ah sawirrada gaar ahaan aqoon isweydaarsigaas sawir qaadista ah. Cadhadaydu waxay u weyn tahay dhawr qodob, marka horena waxaan ku qasbayaa gabadhayda inay ka qayb gasho tartan aysan doonayn ama aysan jecleyn, jecel inay ku qasabto iyada oo ka joojineysa, tan labaad maxaa yeelay waxay ka qaadanayaan waqtiga yar ee u hartay inay lumiso Tartankaas, markay ka faa'iideysan karto waxyaabo kale, maaddooyin kale baran karto ama aqrisan karto haddii ay iyadu dareento, MAADAAD AY WAA WAQTigeeda BILAASH AH KA DIB MAALINTA ARDAYdeeda, waxay yihiin saacado ka baxsan saacadaha dugsiga, iyo tan saddexaad maxaa yeelay dusha sare inuu lumiyo Waqtiga, waa inuu soo saaraa sawirrada si gaar ah FOTOPRIX, oo aan 2 Kiilomitir u jirno guriga, marka 100 mitir u jirta waxaan haystaa sawir-qaade kale oo aniga ii horumarin kara, ama xitaa aniga, oo leh daabic aan ku horumariyo sawirrada .
Waxaan tirin karaa khaladaad badan oo badan, sida xaalada BARRACONES-ka ay wax ku dhigaan, taas oo ah nasiib daro, daadinta, qabow iyo waliba u diidaya inay jaakadahooda saaran yihiin ... ama sida wanaagsan ee ardayda qaar loola dhaqmo, kuwaasoo waxay ahaayeen fasal la mid ah kuwa kale, way aad iyo aad u wareegeen, 5,6 uma dhigna hal arday sida kan kale, labaduba waxay leeyihiin isku imtixaano, isku shaqo guri ... iwm, laakiin mid ayaa sifiican u fiirinaya macalinkaa. .. oo leh 5,6 mid ayaa loo soo koobay 6 kan kalena waa 5, 1 farqiga dhibcaha oo dhan ??? Ma garanayo shuruudaha macallimiintani raacaan ...
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado ra'yigaaga iyo qof hagta oo aan la xiriiro si cabashooyinkayga loo maqlo oo wax looga qabto, maxaa yeelay xitaa waxaan u imid inaan ka fikiro in aan waxaas oo dhan u gudbiyo maxkamadda laakiin ma ogi haddii ay halkaas joogto ama meesha aan ka sheegayo. Waxaan u maleynayaa in midkeygu uusan aheyn mid gaar ah waalidiin badana ay kujiraan xaaladdeyda, laakiin mararka qaar cabsi darteed, marna jaahilnimo darteed, waxba lama qabanaayo oo waqtiga ayaan iska dhaafaa, laakiin waxaan mar horeba ku daalay fadhiisashada daawashada sida ay u xumeeyaan caruurteena, markay arkeen dayaca iyo dayacaadka macalimiinta qaar iyo jihada xarunta daraasada, gabadhayda waa mid maskaxiyan waxbadan laga badalay mararka qaarna xitaa ay culeys ku tahay howlo fara badan oo loo diro guriga oo aysan xitaa heysan waqti ay ku aado Iskuulka loo baxo. Wadada si ay hawadu u qaadato, marka lagu daro dareemida hanjabaadaha qaar ka mid ah macalimiinta (tan waxaa sidoo kale loo qaadan karaa inay yihiin BILAASH laakiin macalimiinta, mise waa inaysan "isbarbardhigin"?).
Aad baad ugu mahadsan tihiin inaad ii ogolaateen inaan halkan ka cabiro waxaanan rajaynayaa in qof i siin karo xalka.
Haddii uu taabtay gabadhaada ama u hanjabay, waxaad xaq u leedahay inaad iskuul aado oo aad ka dhiidhiso masiibadan, waxaa muhiim ah inaad la hadasho maamulaha iyo baraheeda. Si dhab ah u qaad oo macallimiinta waxaas sameeya, haddii aad ku aragto qof waddada maraya garaacis uu u qalmo
Ku jawaab Luis Blanco
Iga raali noqo, maxaan sameeyaa si aan u codsado isbedelka fasalka, maxaa yeelay nooca fasalka aan ku jiro, awood uma lihi inaan feejignaado oo waxaa jira dad aan dhibaatooyin kala soo kulmay oo aan dhigto fasalka 4-aad laakiin aniga am in 4aad 1 Sideen ugu helaa inay ii beddelaan 4 ° 2?
istaandarka channelka dijo
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa gabadheyda oo imtixaan uga baaqatay xanuun dartiis, waxay soo bandhigeysaa shahaado caafimaad macalinkuna wuxuu siinayaa 1 mana doonayo inuu imtixaanka galo, ma caadi baa?
Jawaab ku saabsan xukunka kanaalka
Sidee iyo xaq u sheegashada wiilkeyga qalad uu ka galay dugsiga hada waxay rabaan inay ku soo celiyaan sanad ka hor anaguna waxaan joognaa bartamaha sanadka, sababtoo ah waxay yiraahdeen wuxuu ku leeyahay maadooyin markii ay u ogolaadeen inuu sanadka dhaafo, maxaan sameeyaa si uusan dib ugu celin?
Ku jawaab Griselda
Jasmine luciano dijo
Waad salaaman tihiin, maxaan ku samayn karaa dugsiga sare, halka uu walaalkay u sii socday, sanad ka hor ayay u direen zacar oo hada markay hooyaday rabto inay aaddo inay u qorto, maamuluhu ma aqbalin, maxaan ku samayn karaa kiiskan, isagu horay ayuu u lumiyay sanad waxbarasho
Jawaab Jasmine luciano
Waxaan u socday Jessica dijo
Waa salaaman tahay, magaceygu ​​waa Jesica, wiilkeygu wuxuu ku jiraa sanadkii 4aad ee dugsiga sare, su'aashaydu waxay tahay macallin galay fasalkiisii ​​koowaad kaliya prentto oo siiyay qandaraas wada noolaansho ka dib wuxuu galay fasax xanuun labo maalmood ka hor waxaan u diray qof kale ogeysii ardayda inay sameeyaan ama haddii ay tahay inay qabtaan shaqo wax ku ool ah si ay u gudbiyaan maaddada, taas oo aan u maleynayo inaysan sax ahayn, maanta wuxuu haystaa macallinkan laakiin isagu ma socdo maxaa yeelay weli fasax ayuu ku maqan yahay, qasab kuma aha inuu sameeyo shaqada ama haddii uu tagayo Waqtiga iyo waqtiga wanaagsan ee dugsiga, waa macallinka aan soo xaadirin inuu siiyo saacadaha u dhigma
Jawaab Ibalo jesica
Riwaayadaha Pelayo dijo
Waxaan ahaa iskuulka oo aan saaxiibkey kula hadlayey hoolka maxaa yeelay boorsadeyda ayuu ku qaatay qaanadiisa wuxuuna ubaahanyahay lambarka qufulka, wuxuu bilaabay inuu igu riixo inaan fasal ka dhigo waana u jeestay si uusan mar dambe i taaban, iyo markaasuu si xun iigu qayliyay caano isagoo leh jaranjarada kor u kac. Xaq ma u leeyahay inaan ku qayliyo ama aan garaaco? Waxaan ahay 15 jir
Ujawaabi Pelayo castells
macalinku ma ku qasbi karaa ardayga inuu yimaado fasax
Habeen wanaagsan gabadheyda waa la eryi karaa bil iyo bar kaliya iyadoo laga maqanyahay fasalo qaar
Jawaab Mercedes Hernández Alvarado
Wiilkayga oo dhigta fasalka 1aad ee ESO ayaa laga joojiyay maadadiisii ​​xisaabta, isagoo isu keenaya maadooyinka oo dhan wicitaan caadi ah.
In kasta oo labadii qiimayn ee u horraysay la dhaafay iyada oo lagu salaynayo habdhaqanka xun ee uu ku sii waday koorsada oo dhan.
Tani ma sharci baa, yacni, inaad haysato laba qiimayn oo hore loo oggolaaday adigana dhaqan xumo kuguma waayi doonaan?
Waxaan rabaa inaad talo iga siisaan si aan uga jawaabo su'aal aanan garanayn inay cadaalad daro tahay ama cadaalad tahay Macalinkayga oo aan magiciisa odhan doonin wuxuu odhan jiray magacyada ardayda koorsada sii joogi doonta (koorsooyinku waa markaad shaqadaada kuma fiicna waana inaad joogtaa ilaa ciidaha) si kastaba ha noqotee, dhibaatadu waxay tahay inay i magacaabeen laakiin isagu wuxuu ii sheegay inaan ciyaarayo laakiin lammaanahaygu wuxuu u sheegay inuu si dhab ah u hadlayo wuuna ku jawaabay haa, markaa waan ugu jawaabay sababta uu sidaas u yidhi halkanna waa shay kale oo ah inaynu ku darno dhamaan liidata, waa inaanu helnaa 30 dhibcood wadar ahaan, arinta sayidkan waxaan ka soo saaray 8.5,9.5 iyo 6.5,6.5 6.5 wuxuu ii sheegay inay kuwani ahaayeen dhibco dheeri ah iyo inuu 4 ayuu i siiyay markaa haddii aan ku daro 8.5 + 9.5 + 5 + 5 = 27 iyo waxa aan ku helayo mudadan labada bilood ah ee ugu dambeysa waxaan ahay 30 jir, laakiin wuxuu ii sheegay inay tahay inaan sii joogo si aan u siiyo 4-ta dhibic halka kuwa kale waa inay jeclaadaan ilaa 20 ma aqaano hadii uu doonayay inuu iga xanaajiyo ama uu saxan yahay laakiin qaabka aan ugu fikiro arintaas waxaan u maleynayaa inay tahay wax cadaalad daro ah oo micno malahan hadii aanan laheyn 4taasdhibcaha maxaa yeelay wali way dhici doonaan, marka lagu daro maalinta maaddo kale oo aan doonayay inuu dib u eego laakiin ma aqbalayo, waan ka baryay ilaa aan ka quusto. Fadlan hadaad wax ka ogtahay arintaan waxaan rabaa inaad ii sheegto hadii ay cadaalad tahay iyo in kale
Waad ku mahadsan tahay :), yaa wakhti ku qaatay in uu tan akhriyo oo fadlan haddii cid wax ka ogtahay arrintan ii sheeg.
Ku jawaab Paola Lol
Waxay shaqada ka joojin karaan wiilkayga 3 maalmood oo isku xigta, maxaa yeelay sida ay tahay anigu ma ixtiraamo sahayda dugsiga ...
Ku jawaab Maria Soria * Barrera
Waad salaaman tahay, qof ayaa i caawiya, ma u diri kartaa tikidhada xayiraada ee u hogaansanaan la'aanta lebiska markay ardaydu imtixaanka galayaan?
Jawaab Luchi EV
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa aan sameyn karo haddii dugsiga sare ee gabadheyda aan ka qaato fiidiyoow fiican markii ay dharka iska beddeleyso oo aan iyada oo keliya ahayn laakiin dhowr gabdhood oo ay gabadhaydu dareentay in asturnaanteeda lagu xadgudbay Waxaan u baahanahay inaan ogaado tallaabooyinka qaado qofkaas
Chancro Bhardal dijo
Waad salaaman tahay Laura, ma ogi wadanka aad ka timid? laakiin Mexico waxaa loogu yeeraa filimada qaawan waana dambi ciqaabtiisu tahay xabsi.
Ku jawaab Cahancro Bhardal
Waa salaaman tahay, gabadhaydu waxay leedahay dib-u-dhac yar oo xagga koriinka ah wax walbana iyada ayaa ka qaalisan kuwa kale, dhibaataduna waxay tahay inay billowday sannadka 1aad ee dugsiga sare oo ay leedahay macallin Ingiriis ah oo sabuuradda oo keliya nuqul ka sameeya waana inay ku xisaabtamaan qaamuuska, Sharaxaad kama bixin arinta, aniga ayaa bixinaya lacag qaas ah kiisna ma jiro, warqada sabuuradda ku qoran lama fahmin sidoo kale gabadheyda wey jahwareersan tahay, waxay weydiineysaa waxa ay dhahdo ama waxa la sameeyo waxayna u sheegtaa inay dareemayaan inay hayaan Waalidiinta waan soo wargalinay sababtoo ah xitaa maalmaha qabowgu daaqadaha ayuu furanyahay waxayna bilaabayaan inay ku ooyaan fasalka dhexdiisa ... taas oo ah, haweeneydan dhib yar ayaa haysata.Marka maamulayaasha iskuulka waxay dhahaan waxba ma qaban karaan. waxaa jira daqiiqado dhowr koorsooyin ah Dhibaatada isku mid ah.Qof ma i hagi karaa maxaan sameyn karaa? Mahadsanid
nafta lina dijo
Subax wanaagsan, xagee aadi karaa marka wiilkeeyga uu sameeyo ku celcelin laakiin hadii uu aqoon leeyahay si imtixaan ay ugu dhaafaan sanadka 2aad
Ku jawaab Alma lina
Subax wanaagsan. Su aal ayaan qabaa Maxaan sameeyaa haddii ay gabadhaydu baraneyso fasalka tobnaad oo ay rabto inay wax ku barato farsamo yaqaan Seine ah oo iskuulka ay wax ku baraneysaa uusan dooneyn inay ka tagto saacad ka hor si ay ugu sii diyaar garowdo qof ahaan mustaqbalka iyo in waxay haddaba raadinaysaa xalal si ay ugu soo bandhigto shaqooyinka saacaddaas dugsiga?
Jawaab Sandra Bolaños
Wiilkeygu wuxuu 6 bilood udhaxeeyey isbitaalka la dhigey wuxuuna dhigey koorsadan, wuxuu ahaa 3 saac, bishii May wey fasaxeen wuuna ku biirey iskuulka, sida bulshada Valencian fursad uguma lahan inuu is muujiyo bisha Sebtembar, imtixaanadu waxay leeyihiin Bishii Luulyo Wuxuu ka gudbay xisaabta iyo luuqada iyo 6 maado oo dheeri ah, maxaa yeelay ilaa sanadkaan waligiis waxba kuma dhicin, laakiin dadaal kasta oo uu sameeyay wuxuu ku guuldareystay 5 maado sida teknolojiyadda. Markii la aqrinayay xuquuqda ardayda, su'aasha wuu kacaa, Wiilkaygu wuxuu soo maray xaalad gaar ah, oo uu u qaadan karo inuu ubaahanyahay talaabooyin waxbarasho oo gaar ah, laakiin wuxuu ku qasbanaaday inuu galo isla imtixaanka dhamaan ardayda ay isku fasalka yihiin.Taas miyay iska caadi tahay? Iskuulku wuxuu rabaa inuu ku celiyo fasalka, waxaan filayaa inay aad ayaan ugu xumahay isaga.
Iftiin Esther F dijo
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ardayda iskuulada lacagta la siiyo ay leeyihiin mimosa xuquuq waxbarasho haddii wasaaradu ay ku taageerto waxbarashadooda qaab ilaana.
Jawaab Luz Esther F
xumberto mejia dijo
Waxaan ku weydiisanayaa jawaabtaada sida ugu dhakhsaha badan; Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii macalinku fiirin karo shandadayda ogolaansho la'aan aniga iyo waalidkayba
Ku jawaab humberto mejia
Waad salaaman tihiin, waxaan ahay arday ka mid ah EPET N ° 7 "Vicente A. Salemi" oo waxaa dhacda in ardaydayda dugsigayga ee yimaada 1 daqiiqo daahay loo diro guriga, waxay u isticmaalaan tan hab anshax, waa iskuul dawladeed iyo aniga doonayay inuu ogaado haddii uusan ku xadgudbin wax xuquuq ah? Naga caawi in badan oo naga mid ah ay rabaan inay waxbartaan iyo sababta oo ah waxaan leenahay dhibaatooyin noocyo kala duwan ah si aan uga qayb galno machadku nama diidayo waxbarashadeena: c waxaan ka sugeynaa jawaab ardayda Tata.
nata aviles dijo
Waad salaaman tahay, shaki ayaan qabaa, ii sheeg, macallimiintu way ka saari karaan shandadda shay kasta oo ku jira (waxaan haystaa macallin haddii aad waajibaadkaaga la imaan weydo, shandadda ayay kaa qaadaysaa) aniga sax maahan wax badan ayey xanuujisaa maadaama aysan ahayn kaliya maadada waxaa jira 14 kale waana lama huraan buugaagta iyo buugaagta xusuus qormada ah ee ay iska saareyso runti ma fahmin waxa ay sameyneyso inay tahay caqli xumo
Ku jawaab Nata aviles
Waxa aanan jeclayn ayaa ahayd in qofka sida la sheegayo leh waajibaadka waa khalad uun
Ma iska saari kartaa nasashada?
Waa hagaag, gabadhaydu waxay ku jirtaa machad farsamo oo sare wax walbana way fiicnaayeen illaa toddobaadkan markay timaaddo iyada oo ooyaysa fasalladeeda oo ay la kulantay xaalad aad u xun oo uu la joogo madaxdeeda mihnadeed, waxay ugu yeedhay falcelinteeda si xoog leh iyada oo aan dulqaad badan lahayn jahwareer iyo hanjabaad ah inay guriga soo wici doonto si ay aniga ii soo sheegto tan, laakiin sidoo kale waxay u sheegtay iyada maadaama aysan awoodin inay sameyso ku-dhaqankeeda, way i soo wacday waxayna ii sheegtay inaysan garanayn sida looga fal celiyo oo ay la tashatay macallimiinta kale iyo in sida muuqata kuwa kale ay isku fikir yihiin sidoo kale waxaan waydiiyaa asxaabteeda fasalka oo ay dhahaan isla midkoodna kuma filna iyada oo wacday iskuulka ay ku tababaraneyso inay waxyaabo xun ka sheegto iyada waxaan jeclaan lahaa inay ka jawaabaan tan mana ahan waxaan ogahay in xuquuqdooda lagu tumanayo
Jawaab Rosemarie Seemann
waxaa jiri doona simi dijo
Haddii bararka dhinacyada aad u dheer la jaro oo aysan ahayn timo iskuulka, waa gardaro
Reply to yahayra simi
Haddii dhinacyada ardayga gubantiisa la jaro waqti dheer oo aysan ahayn timo iskuulka, waa weerar
Haye, Ma iga caawin kartaa xallinta dhibaatada?
Waxaan u maleynayaa inaan ku hadlayo magaca ardey badan oo ka tirsan dugsigeyga markii aan iraahdo waxaa jira macalin aan ixtiraamayn wiilasha iyo gabdhaha goobta (Baccalaureate). Illaa iyo hadda, ama uguyaraan aan ognahay, waxa kaliya ee uu sameynayaa waa inuu yahay macallin xun, damiir leh, waan ku dhiirranahay, waa yaab sida ay u muuqato. Waxaa soo baxday in macallinkani uusan ixtiraamin aragtida ardayda, wuxuu noo sheegayaa in 'dhammaantood ay si toos ah qashinka u aadaan', xitaa ma sharraxo manhajka oo wuu nagu qoslaa marka aan ka jawaabno su'aalahiisa, iyadoon loo eegin hadday saxan yihiin iyo inay qaldan yihiin. Maaha in la sheego imtixaannada; Wuxuu na siiyaa fasal laba saacadood ah ugu badnaan, kaliya wuxuu aqrinayaa labo cutub oo ka mid ah buugga hadda jira (oo aad u yar xiisaha, habka), wuxuuna na siiyaa imtixaanno ku dhow soddon bog, oo aan buun buunin, qiyaastii afar maalmood. "Waxaad ku jirtaa dugsiga sare," ayuu noo sheegayaa, in kasta oo aanu ognahay taariikhda dhammaan imtixaannadayada oo aanu maaddada ku soo rogay inta hartay iyada oo shukaansi lagu sheegay imtixaannada dhexdooda ah. Ma jirtaa waddo, sida farsamo yaqaan (tusaale ahaan) oo aan shaqadiisa si fiican u qaban oo shaqada laga eryo, in ay ninkan ku beddelaan?
PS: Isagu si adag buu u diidaa inuu garaaco. Maxaan sameynaa xaaladan?
Waa salaaman tahay, gabadhaydu waa 11 jir ku dhowaad 12 jirna waxay ku jirtaa iskuulkii ay joogtay tan iyo markii ay yarayd waxaa jira kormeer lala wadaago waxaanan weydiinayay sannado badan in kormeeraha uu waqti badan la qaato iyada awgood Dhibaato ay ku qabato nafteeda waxay qabtaa curyaaminta maskaxda waxayna ku dhacdaa kursi Shaagagga, kormeeraha ayaa kaliya beddelaya xafaayaddeeda hal mar ... Waxayna u baahan tahay in laga caawiyo waxyaabo badan maadaama ay tahay gabar caqli badan, laakiin iyadu gadaal ayey uga sii socotaa. .. waan sameyn karaa. Mahadsanid
Ku jawaab Paqui
Waad salaaman tihiin, magaceygu ​​waa Thiago, waxaan dhigtaa 1 sano oo dugsiga sare ah, waan qabanayaa, waxay i siin karaan canaan
Iyo shaqada guriga? Xagee jogaan
Waad salaaman tihiin, waxaan ku guda jirnaa shahaado dhexdhexaad ah cobfeccion iyo fashion. Macallinka qaabdhismeedka ayaa na siinaya isbarbar dhig waana koobiyeynaa. Waxaan u sameynaa qaababka sida aan kari karno, wax sharaxaad ah nama siinayo Hadda waxaan haynaa imtixaan ku lug leh shan ama lix nooc oo qaabab ah iyo kalabar fasalka kaliya ayaa yaqaan sida loo sameeyo laba. Ma cadaalad baa in sidan naloo baaro ???
Ku jawaab Mayte
qalcaddii dixon dijo
Ardaygu xaq ma u leeyahay inuu dalbado wax ku haray fasalka xitaa haddii uu madax adag yahay?
Ku jawaab dixon castillo
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa gabar codsatay iskuulka Monserrat, wax badan ayey diyaarisay si ay u gasho laakiin neerfayaasheeda ayaa mar kale khiyaameeyay laakiin waa arday aad u fiican, iyadu aqoon badan ayey leedahay, boorsada 108.5 ma gaaro xadka Iskuulka ay tagto, ardaydu waxay leeyihiin qaab kale oo ay wax ku bartaan oo iyadu aysan la qabsan iyagoon cidna wax xushmad ah u haynin waa iskuulka dadweynaha ee xaafadda oo waxay diyaar u tahay inay fadhiisato oo ay hesho darajo ay ku dhigato waxay rabtaa dalabyo dheeri ah. waxay leedahay mashaariic aad u walwal badan barashadaasna meelna ugama socon doonto, waxay dareemeysaa jahwareer waxay rabtaa oo kaliya fursad ay ku gasho dugsigan oo kaliya da'da kuma caawineyso inay sii wadato codsigeeda waa wax laga xumaado in qofna uusan fahmin iyagana fadhiiso si aan u dhagaysto iyada oo danaynaysa waxa ku dhacaya maskaxdeeda nafsiga ah ayaa u hadhay Waxay igu dishaa si aad u xun markaan arko iyada oo sidan ah. Gabadhaydu waxay yeelan doontaa xoogaa xaq ah, qof ayaa fahmi doona sida aad dareemayso, waan ku dhaaranayaa, waad ogtahay, imtixaankii oo dhan wuu jabay oo si toos ah ugama dhamaan karin sheekada Isbaanishka, waxay dul dhigeen 0 iyada, inkasta oo uu jabay maxaa yeelay waxay leedahay leukopenia.Marka ay aad u walaacsan tahay taasi waa waxa ku dhacay Hooyo ahaan waxaan dareemayaa murugo aad u weyn iyada, way mudan tahay inay gasho. Waxaan markale weydiinayaa, gabadhaydu waxay yeelan doontaa xoogaa xaq ah.
Waxaan xaq u leenahay inaan ka codsano badalka macalinka miiska maxkamada markaan diidno sedex jeer oo kala duwan maxaa yeelay mas'uuliyiinta waxbarashadu ma fuliyaan xuquuqdaas
KALIYA MONTEJANO dijo
MA KU HELI KARO IN MARKII UU KA CABANAYO MACALIN MAAMULKA SABABTA WAQTIGA AH, SIDA UU MALAHA AQOONTA UU UGA HADLO TELEEFONKA WELIGU WUXUU KU JIRA WAKHTIYADA FAGAARAHA WAA INA LAGU SHAQAYAA INTAAS. HOOYADII AY KA WABATAY XAQIIQADA.
Jawaab SOLEDAD MONTEJANO
Waxaan ku jiray fp waxaan waydiiyay macalinkayga imtixaanada uu qaaday ilaa daqiiqadaas, wuxuu ii sheegay maadama uu iminkaba mar hore i baray imtixaanada mar dambe, uusan hadana i bari karin kuwan.
Xaq ma u leeyahay inaan arko dhammaan imtixaannada aan ku qaadanayo halkaas inta lagu guda jiro koorsada?
Ku jawaab Ibai
hello, ardaydu xaq ma u leeyihiin inay sawir qaataan, koobiyaan ama ku qoraan xaashi ugu yaraan qaladaadkooda imtixaanka caadiga ah?
Ku jawaab viki
Xuquuqdu aad bay u cadahay, laakiin waajibaadka… xagee jiraan? Sababtoo ah xuquuqda iyo waajibaadka dadku waxay macno samaynayaan oo keliya markay is barbar socdaan: lama fahmayo inaad dalbato xuquuq haddii aadan rabin inaad gudato waajibaadkaaga.
Jawaab José Joaquín Rodríguez
Aad ayey u wanaagsan tahay in xuquuqda lagu daro. Laakiin waxay iska iloobaan shaqada guriga. Dabcan, taasi waa dhibaatada. Kaliya waa inaad tagtaa machad si aad u aragto wax badan oo xaq ah laakiin waxay umuuqataa in caruurta maanta aysan laheyn wax waajib ah.
Fiid wanaagsan waxaan leeyahay walaac, inantayda waxay dhigataa fasalka tobnaad fasalada xisaabta ardayda qaarna way waxyeeleeyaan fasalka, macalinka wuxuu qaatay go aan ah inuusan dhigin fasalka laakiin wuxuu uqaataa inuu sifiican usheegay oo uu qiimeeyo maadada markay ardayda waxay qabtaan Way dhug yeeshaan, way sheegtaan, wuxuu kujawaabayaa inay iyagu yihiin kuwa lagu eedeynayo inaysan ka saarin asxaabtooda fasalka, ama daalka ay isku fasalka yihiin, taasi waa sharci, waa ardayga waa inuu ka saaraa fasalka ama macalinka.
Jawaabta jael vargas
Waad salaaman tahay, waxay noqon doontaa suurtagal in wiilkeyga looga haro hal sano maqnaanshaha boqol / maqnaansho oo aanan qiil u helin oo aan saxiixay dukumiinti ballanqaad ah Waxay noqon doontaa inaan racfaan ka qaato kiiska, fadlan i caawi
Ku jawaab glenda
Ardayga dugsiga sare dhibaato ayaa haysata maxaa yeelay guriga dhexdiisa dhibaatooyin ayuu ku qabaa taas awgeed, mararka qaarkood ma dhug yeesho mana sameeyo shaqo guri sidoo kale waa caajis, laakiin macallinka ayaa go'aansaday inuusan u sii doonaynin dugsiga oo uu maamulehu sameeyo ma doonayo isaguba Arday ma laga qaadi karaa waxbarashada? Wuxuu u soo jeediyay inuu isaga ka dhigo mid raba oo soo kabsada laakiin iyagu mar dambe ma doonayaan inay ku galaan dugsiga sare, wax ma laga qaban karaa? Waxaan rajaynayaa oo i caawinayaa
Jawaab Dylan Gael
Maqnaanshaha koox arday ah ama hal arday, ma koorsada oo dhan ayaa la ciqaabi karaa? Diidida xuquuqdooda soo bandhigida howlaha, siinta qiimaha u dhigma shaqadooda?
Ku jawaab silvia
Wiilkeygu wuxuu sameeyay sanadki ugu horeeyay ilaa sanadka seddexaad sanadkii seddexaadna wuxuu ka tagay bishii Nofeembar maalmihii ugu dambeeyay, waxaa ii soo baxday in sanadkaan uu doonayay inuu dib u bilaabo markii aan u tagay inaan weydiisto meeshiisa wey ii diideen taas meel uma bannaana isaga maxaa yeelay isagu ma aha arday ka socda machadka, tan iyo maalintii ka horreysay markii ay qaateen wiil la eryey oo ay ii sheegeen in aan u diro fasal la dedejiyey si uu mar labaad sannad kasta u sameeyo maxaan sameeyaa
Subax wanaagsan. Wiilkeyga oo ku dhibaatooday isku-habeynta dugsiga sare cadaadis ay saareen asxaabtiisa iskuulka maxaa yeelay wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Ecuador. Waa run runtii waxa aad ku daabacdo maqaalkan ee ku saabsan xuquuqda carruurta, sidaa darteed waxaan kuugu mahadcelinayaa inaad ka caawisay qoysaska arrimahan aadka muhiimka ugu ah horumarinta carruurta yar-yar. Habsiin !!
agaasimuhu nooma oggolaan inaan ka tagno xilligeenna bixitaanka ee horay loogu calaamadeeyay xeerarka
luminta taleefanka gacanta
haddii ay qaban karaan? ama maxaa yimaada?
Ma sharci baa, marka laga hadlayo, in iskuul ay ardayda ka siiyaan 11 imtixaan 3 maalmood gudahood iyagoon is diyaarin?
dhammaantood waa xuquuqo iyo waajibaadyo, meeday waajibaadkii. Waajibaadka waxbaran, waajibaadka inuu ladhaqmo ixtiraamka ardayda iyo macalimiinta kale, waajibaadka kaqeybgalka fasalada, iwm.
Jawaab karina Granda
rimood caato ah dijo
2daas, imtixaannada aan caadiga ahayn ee bisha Juun, soo kabashada, mid ka mid ah maadooyinka waxaa laga beddelay maalinta imtixaanka, digniin la'aan, wiilkeygu ma aadin taariikhda cusub, maxaa yeelay ma uusan helin, su'aashaydu waxay tahay, haddii aan sheegan karo ee sameeya imtixaanka waqti kale mahadsanid….
Jawaab uur qaadida aceituno fino
Anigu waxaan ahay wakiil ka socda hay'addeyda iyo sababo jira awgood, mashquulinta shaqsiyadeyda awgeed, waqti badan ayaa iga lumay waxayna ka muuqatay qalin jabintayda sanadkan maadaama aanan awoodi karin inaan qalinjabiyo, waxay noqon laheyd waa cadaalad in ay iila dhaqmaan si la mid ah sida caadiga ah ee ardeyda caadiga ah waxaan cadeeynayaa inaanan cidna dhayalsanayn laakiin kaqeybgalka shirar badan aad ayey ii saameeyeen aad baan ujecelahay jawaabtaada aad baad u mahadsantahay
Waad salaaman tihiin, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay xaq u leedahay ardaygu inuu helo dhammaan darajooyinkooda iyo haddii ay ku hayaan buugaagta xusuus-qorkooda darajo, maxaan samayn karaa
Jawaab ku bixi
IES LA MARINA IN BEZANA CANTABRIA WAXAY KU YIRAAHDAA WAA BILILAAL laakiin ma ixtiraamaan xuquuqda ardayda ee faransiiska. Turjumaada oo aan caawinaynin ardayda ka horumarsan waa fasal celis waana kaydad xidhan, oo leh lacag dawladeed iyo mid sabool ah tayada luqadda faransiiska ee IES LA MARINA BEZANA WAA NEFASTO SOS.
Ma bartaan oo ganaaxyada iyo demotiv dartiis madam patricia de bezana oo faransiis ah ma sharxeyso musiibo inay yihiin 13 sano jir caruur ah waxayna ka dalbanayaan sidii inay yihiin Faransiis oo iyadu boos uma haysato boorso kaliya iyo 5 macalinka patricia de bezana cantabria oo waxaan galaa liiska si aan toos ugu barto habka iyo barbaarinta
Ku jawaab Elena
MA KARAXSAN KARAA WAXA AAN FILAYO AYAAN LEEYAHAY MACALIMIINTU INAY SOO JOOJIYAAN OO AY II SHEEGAYAAN IN AY TAHAY KUWA FARMAYA KINA AY LEY YAHAY IN AY SAMEEYAAN WAX KASTA OO AY II SHEEGAYAAN IYO DUGSIGA AAD LEH EE AY IGU YIRAAN CADAALO, XATAA INTA AAN AHAY IYO INTA AAN DHAMAAN FASALADA AAMINSAN K WAA CADAALAD LA'AAN.
IYO IN AAN AAN LA HADLI KARIN AGAASIMAHA WAAYO SABABTOO AH INTII BARBARAHA HALKAN JOOGO OO AANAN HELI KARN MAXAA DHACAYA?
Jawab MARIA CI
Ardayda dugsiyada gaarka loo leeyahay miyay xaq u leeyihiin xorriyadda hadalka?
Timahaygu waa madow oo waan yara iftiimiyay, si dhib leh ayaa loo ogaan karaa, maahan in la yiraahdo lama dareemi karo, laakiin xitaa sidaas oo ay tahay waxay ii soo direen inaan iska siibo waxayna ii diideen inaan barri fasalka aado haddii aanan "hagaajin . "
HADDII AY CADAALO YAHAY IN AY JIRAAN 5 IMAMO MAALINTAASI? (Waxaan ula jeedaa 4 ka mid ah ESO)
HADDII MACALINKU DIIDI KARO IN LAGU QAADO IMTIXAAN TAARIIKHDA XILDHIBAAN AH WAAN KU WAAYEYAA MAALMO DHEER AH MACHADKA AQOONSIGA AQOONSAN EE (MACLUUMAADKA WAX KASTA OO MACALINKA AH)
Ardayga miyaa laga baari karaa goobta ciyaarta?
Ku jawaab jose luis
Miyay kugu qasbi karaan inaad sii joogto xarunta markaad 18 jir tahay oo aanad lahayn macalin?
Ku jawaab Antonela
Shan talo si aad uga badbaado kuleylka haddii ay tahay inaad waxbarto
Koorsooyin bilaash ah oo ka socda Miriada X